Apple dia mampiditra fikarohana amin'ny tag amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Apple dia mampiditra fikarohana amin'ny tag amin'ny App Store
Angel Gonzalez | 10/04/2021 20:00 | App store, About us
Apple dia iray amin'ireo fanavaozana lehibe kokoa ao anatin'ny iOS 14. Izy io dia momba ny iOS 14.5 izay ao amin'ny fanjakana beta izay andraman'ireo mpamorona sy fizahan-toetra ny vaovao fa diso ireo hadisoana. Na izany aza, mandraka androany dia tsy fantatsika ny daty hahitan'ny kinova farany ny hazavan'ny andro ary na ireo avy any Cupertino aza manana ny akanjony. Ny mpampiasa sasany izay manana beta an'ny iOS 14.5 napetraka ary mpampiasa hafa miaraka amin'ny iOS 14.4.2 dia manomboka mahita Fikarohana tag ao anatin'ny App Store. Io dia hahafahan'ny mpampiasa ampio zavatra voafaritra kokoa hikarohana ary manatsara kokoa ny fikarohana ataonao. Hitsapa an'io fampiasa io ve i Apple ao amin'ny iOS 14.5?
Fikarohana amin'ny prof ao amin'ny App Store miaraka amin'ireo tag vaovao
Ny vaovao dia nitsambikina tamin'ny tanan'ireo valam-pifanakalozan-kevitry ny fiarahamonina MacRumors ary mpampiasa Twitter sasany. Nampitandrina izy ireo fa rehefa mitady ny App Store dia mamela azy ireo asio marika raha karohy. Izany hoe, raha mitady mpamoaka horonantsary isika, rehefa mametraka "editor" dia afaka manampy izany tag izany ary manatsara kokoa ny fikarohana dia afaka manampy tag hafa antsoina hoe "video". Araka izany, ny App Store dia hiampita ireo tags mba hahitana ireo fampiharana rehetra misy ireo famaritana ireo.
iOS 14.5 dia hampiditra rafitra famerenana ny satan'ny bateria
Ny sasany amin'ireto mpampiasa ireto dia manana ny iOS 14.4.2 napetraka ao amin'ny fitaovany ary ny sasany kosa navotsotra tamin'ny alàlan'ny iOS 14.5 beta farany. Manoro izany fa ireo mari-pamantarana tafiditra ao amin'ny motera fikarohana an'ny App Store dia fanovana avy amin'ireo mpizara afovoany avy any Cupertino ary afaka manaparitaka ny fiasa na inona na inona kinova izay ananantsika raha mbola avela ao anaty kaody. Amin'izany fomba izany, Apple dia afaka nanampy ireo tags rehetra amin'ireo mpampiasa iOS 14 na inona na inona na nametraka ny iOS 14.5 taorian'ny famoahana azy ireo na tsia.
UpdateMajor App Store Update avy amin'ny Apple: fampidirana "tags" fikarohana ho an'ny valin'ny sivana:
Ny tagy fikarohana dia teny fampiasan'ny olona rehefa mikaroka ao amin'ny App Store mba hanivana ny valin'ny fikarohana, noho izany ny mpampiasa kokoa dia ny tag tsy dia misy hampiasan'izy ireo amin'ny sivana. pic.twitter.com/jc4JbtHixd
- Nick (@nickjsheriff) March 21, 2021
Ity iray ity fomba vaovao hikarohana mamela ny mpampiasa hanala bebe kokoa ny fikarohana sy hahita ny fampiharana mazava tsara kokoa. Rehefa manampy marika maromaro kokoa isika, dia teritery ny fikarohana amin'ireo rindranasa izay tena manao izay tiantsika. Mazava ho azy fa tsy maintsy hanao izany ireo mpamorona havaozy ny rindranasao hanazavana hoe iza ireo marika mamaritra ny rindranasa ka rehefa tonga ny manosika dia manambola ny fikarohana ataon'ny mpampiasa.
Sary - @Nickjsheriff
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Apple dia mampiditra fikarohana amin'ny tag amin'ny App Store
Tetikasa tsara indrindra ho an'ny Safari amin'ny iPhone sy iPad
Ny fampisehoana 120 Hz ProMotion dia ho tonga (farany) miaraka amin'ny iPhone 13